WINE 6.0 inosvika yakagadzikana vhezheni ine yekutanga rutsigiro rwe macOS ARM64 | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.0 inosvika mune yakagadzikana vhezheni ine yekutanga rutsigiro rweMacOS ARM64 uye 8300 shanduko
Taiziva kuti ichasvika muna Ndira, asi zuva chairo raive rakaomarara kufungidzira. Yekupedzisira vhezheni vhezheni yaive XNUMXth RC yeXNUMX software software, saka takafunga kuti mangwana rechinomwe rinogona kusvika. Asi hazvina kunge zvakadaro, uye masikati ano WineHQ akakanda WAINI 6.0. Uku kwatove kuburitswa kwakadzikama uye hombe yekuvandudza yanga iri mumabasa kwegore. Iko shanduko, idzo dzisiri shoma, dzakatsanangurwa muiyo yapfuura link.
WineHQ inoti WINE 6.0 yauya nayo zvinopfuura makumi matatu neshanduko mumwe nemumwe. Iyo ine zvakawanda zvinogadziridzwa, asi, senguva dzose, inosimbisa mashoma chete, kunyanya mana. Iyo yekuvandudza timu yakatora mukana wekuburitswa kuti ikumikidze kuna Ken Thomases, akashaya nguva yeKisimusi isati yasvika. Thomases yaive yakanangana nerutsigiro rweMacOS. Pazasi iwe une rondedzero yenhau dzakakurumbira dzeWINE 6.0.
WINE 6.0 inosimbisa
Kernel module mune PE fomati.
Vulkan Kudzokera kweWineD3D.
Tsigiro yeDirectShow neMedia Foundation.
Kugadzirisazve chinyorwa checonsoon.
Tsigiro yemidziyo yekuisa mbishi.
Pakutanga mutyairi mune USB kernel.
Kugadziridzwa kwakasiyana siyana mukutsigira Vulkan.
Kuwanika kumeso ekuvharidzira kuburikidza neRandR 1.4.
Tsigiro yeWebSocket API.
Pakutanga rutsigiro rweARM pane macOS.
Zvekuvandudza maturusi ekuvandudza.
WINE 6.0 iri pano zviripo zviri pamutemo uye zvakagadzikana. Izvo zvinongedzo zvekuburitsa zviri izvi y uyu mumwe, asi isu tinokurudzira yekutanga nekuti yechipiri inowanzo rovera (sezvazviri izvo izvozvi) kana inotora nguva yakareba kuti ivandudze. Mabhainari anowanikwa mu peji rekurodha peji, kubva kwatinogona zvakare kuwana ruzivo rwekuisa pane Android, Ubuntu / Debian, Fedora, macOS uye mamwe masisitimu akadai seSUSE, Slackware kana FreeBSD. Iyo kodhi kodhi inogona zvakare kutorwa kubva kune iyi link iripamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.0 inosvika mune yakagadzikana vhezheni ine yekutanga rutsigiro rweMacOS ARM64 uye 8300 shanduko
Raspberry Pi OS 2021-01-11 inobvisa Flash uye inowedzera izvi zvimwe zvekuvandudza
Flatpak 1.10 inouya pamwe nekuvandudza kunowedzera kukurumidza kwekutora